> Resource > Video > PLEX metadata Dhibaatooyinka? Xaliyay
Anigu waxaan dhib la Plex. Ma jiid karaa metadata ee TV i tus.
Waxaa laga yaabaa in aad la kulanto xaaladan. Halkan waa xalka. Maqaalkani waxa uu ku talin doonaan codsiga ah oo awood badan. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si habsami leh ku dar wararka metadata oo aan la dhexgelin kasta. Sidoo kale arjigaan maaraysa videos at 30X xawaare dheereysa oo video ah baaraandegi leeyahay tayo waayi maayo.
Wondershare Video Converter Ultimate u Mac ( version Windows sidoo kale avaliable) waa agabka ugu wanaagsan ee ha waxaad ku dari metadata kasta video aan qaab la dhaafi karin. Tagger metadata waa la jaan qaada labada Windows iyo Mac (Yosemite ka mid ah) OS. Waxaad ku dari kartaa metadata in aad filinka, TV show iyo guriga video. Metadata ka mid ah macluumaadka agaasimayaasha, jilayaasha, magaca dhacdo, comments iyo sharaxaada, iwm Waxaa gabi ahaanba waa qalab badan oo horumarsan metadata badan Plex.
Sida loo dar metadata in Videos
Halkan waa tutorial kooban oo ku salaysan version Mac ah. Haddii aad raadinayso kale iFlicks ah u Windows, fadlan riix halkan .
1 in tagger metadata this geliyaan aad video
Waxaad jiidi karaan jeedi video galay codsigan, ama aad gali kartaa adiga oo videos u galay adigoo riixaya "+" button on interface ugu weyn.
2 qaab video saarka Set
Tagger metadata Tani waxay u baahan si aad u dhigay qaab video saarka sida MOV, M4V ama qalab Apple. Si ay u sameeyaan kuwa jidkiisa ku Just raaco. Fadlan riix "Video" tab, ka dibna dooro MOV ama M4V. Sidoo kale waxaad riixi kartaa "Qalabka" tab, ka dibna ka dooro mid ka mid ah aaladaha Apple ayaa, tusaale ahaan iPhone ama iPad.
3 dar metadata si aad video
Tagger metadata Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku darto iyo edit metadata si aad video in qaab kasta. Just guji icon this qor magacaaga video, guji "baadh", ka dibna riix "OK". Codsiga waxaa eegi doona wixii macluumaad ah ee metadata oo si fiican u dhigma. Geedi socodka oo dhan oo kaliya dhowr ilbiriqsi kharash.
4 Play videos la metadata
Hadda waxa tallaabadii u dambaysay. Fadlan riix badhanka diinta ka . Markaas video la metadata dhawaan synced in Lugood aad. Marka aad Lugood furo, waxaad ka heli doontaa metadata in lagu daray, ka dibna video la aqoonsan yahay oo leh dabool.
Wondershare Video Converter Ultimate Ma aha oo kaliya kaliya tagger metadata ama editor. Waxaa dhab ahaantii waa Converter oo dhan-in-mid video ah. Ha kartaa in aad loogu badalo videos, videos edit la saamaynta qurux badan, gubi video inay DVD, iyo xataa soo bixi videos ka goobood video qaybsiga, sida Facebook, YouTube. Iyada oo sida qalab boosaska badan ee gacanta, waxa aad ku badbaadin karto dhibaato badan.